Sharciyada Saxaafada | Somali Media Mapping
Sharciga qabyo qoraalka saxaafada Soomaaliyeed, kaasoo badali doono midkii 2007dii, waxaa meel mariyay Golaha Wasiirada bishii Luulyo 2013kii, wuxuuna soo maray geedi socod latashiyo badan ah intaan dib loo qorin loona dhiibin Baarlamaanka Soomaaliyeed bilaha hore ee sanadka 2014ka. La tashi kastaba gudigu wuxuu ka koobnaa Wasaaradii hore ee Warfaafinta, Boostaha iyo Isgaarsiinta iyo Gaadiidka (MIPTT) Ururka Suxufiyiinta Qaranka Soomaaliyeed ee hada joogo iyo ka qeyb galeyaasha maxaliga ah, oo ay la jiraan wufuud isugu jireen suxufiyiin, ka howl galeyaasha saxaafada, masuuliyiin dowladda ah iyo ururada bulshada.
Geedi socodka wada tashiyada wuxuu ahaa hindise muhiim ah kaasoo suura geliyay doodo furan iyo ka qeyb galka diyaarinta sharci muhiim ah kasoo aan saameyn ku yeelan doonin oo kaliya ka howl galeyaasha saxaafada ee saameyn doono shacabka ku nool dalka iyo daafaha dunida oo dhan. Wada tashiyadu waxay ka bilowdeen magaalada Muqdisho bishii Oktoobar 2013kii waxaana daba socday la tatashiyo kale kuwaas oo kaas la mid ahaa oo ka dhacay magaalooyinka Garowe, Kalkayo, Baidoa iyo Beletweyne, shirar dheeraad ahna waxaa lagu sameeyay magaalooyinka Nairobi iyo London. Gobal kastaba waxaa idaaco maxali ah lagu kallifay inay baahiso barnaamij lagaga qeyb galayo taleefanka oo looga doodayo shargiga, si loo suura geliyo inuu shacabku ka qeyb qaato geedi socodka. Natiijadii ka soo baxday wada tashiyadaas oo ay garab socdaan dardaaranadii la laga soo aruuriyay dadkii khibradaha dheer u lahaa sharciyada saxaafada caalamka ayagana xisaabta ayaa lagu darsan doonaa, qabyo qoraalka kama danbeysta ahna wuxuu diyaar noqon doonaa bilaha hore ee sanadka 2014ka.